Momba ny - BikeHike
Tianao ve ny bisikileta, fizahan-tany mitaingina bisikileta ary fitsangatsanganana bisikileta?
Hevitra momba ny tranokala - bilaogy
Ny BikeHike dia sehatra iray ahafahan'ny izaho, izay tia bisikileta ary indrindra ny fizahan-tany mitaingina bisikileta, mizara vaovao mahasoa momba ireo lohahevitra mitovy.
Mandritra izany fotoana izany, ny hevitry ny tranokala dia ny ahafahan'ny olona manana tombontsoa mitovy amin'izany hitambatra, hifampiresaka ary hizara vaovao amin'ny alàlan'ny bilaogy.
Izany no tena maha samy hafa avy amin'ny sehatra fiadian-kevitra, izay tsy misy fonctionnaire mety ho an'ny fanehoan-tena, izay ahafahanao mamorona lohahevitra, azonao atao ny miala amin'izany, fa izany rehetra izany dia hiparitaka manerana ny toerana malalaka. Miaraka aminay, ny eritreritrao sy ny fahatsapanao momba ny fotoana mahafinaritra dia hotehirizina amin'ny toerana iray. Manana toerana manokana ianao, izay tianao hozaraina amin'ny hafa, ohatra, amin'ny fanomezana rohy mankany amin'ny namana, na tianao avela irery miaraka aminao. Nanao dite kely aho, naka mofo kely, ary tamin'ny ririnina mangatsiaka dia tsaroanao ny nahafinaritra anao tamin'ny fahavaratra. Nararaka cola tamin'ny gilasy tamin'ny andro fahavaratra mafana ary mamelombelona rehefa mamaky ny dianao amin'ny ririnina.
Karazana diary manokana ity, izay navoaka tao amin'ny vondrom-piarahamonina mitovy hevitra ihany, noho izany dia hahazo valiny mavitrika.
Mba hanaovana izany dia mila misoratra anarana fotsiny ianao, aorian'izay dia afaka manomboka ny blôginao manokana ianao.
Miomana amin'ny dia bisikileta
Ny tranokala dia misy fampahalalana izay, ho fanombohana, mandrisika anao handeha amin'ny dianao voalohany amin'ny bisikileta, ary avy eo milaza aminao ny fomba hiomanana amin'izany. Hianarantsika eto ny lalan'ny bisikileta halehanao, ny zavatra entina miaraka aminao, ny fomba fitafy entana, ny fomba hitondrana ny bisikiletanao, ny zavatra hohanina, sns.
Tsy hiraharaha ny olana amin'ny fisafidianana bisikileta sy singa hafa, kojakoja, fitaovana izahay. Ohatra, fakan-tsary inona no tsara alaina amin'ny dia an-tongotra? Na eto aza dia betsaka ny azo resahina.
Ataovy tsy am-pihambahambana. Mba hahasoa sy tsy hanimba ny fahasalamana ny bisikileta, dia tokony ho fantatrao ny teknikan'ny bisikileta, misafidy ny haben'ny bisikileta ary mamorona ny mety.
Mazava ho azy fa tokony ho afaka manamboatra bisikileta amin'ny tananao ianao, mitazona azy io ary mikarakara azy. Hanampy anao hahazo fahaizana mahasoa toy izany koa ny lahatsoratray.
Raha tianao ny tranonkala, raha mahita ny fanantenana amin'ny fampandrosoana ny fiaraha-monina ny mpankafy ny hetsika ivelan'ny trano, bisikileta, bisikileta fizahan-tany sy ny bisikileta, dia hiaraka, manasa namana, mamela rohy mankany amin'ny tranonkala, raha azo atao, ary avy eo dia afaka. mazoto mivoatra, mampalaza ny fomba fiaina ara-pahasalamana, eny ary "hihatsara ny fiainana, hahafinaritra kokoa ny fiainana"
Mirary soa ary mirary soa!
Mpanoratra ny BikeHike.